दुध हल्लाउँदै शरीर मच्काउँदै - Nepali Sex Tube
विवाहित केटीको यौनकान्ड
विहे गरेपछि जीवनमा खुसी आउला भन्ने लाग्थ्यो। सब झुठो रहेछ। विहे गरेको २ वर्ष बतिसक्दा पनि आफ्नो पतिबाट पाउनुपर्ने सुख नपाएपछि मन निरस हुनु नै थियो। बुढाको काठमाडौं र भरतपुरमा सुपरमार्केट थियो। भरतपुरको सुपरमार्केटमा काम गर्ने मान्छे थिए, काठमाडौंको हामी बुढाबुढी मिलेर चलाएका थियौ। बिहान देखि दिउँसोसम्म बुढा बस्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि बेलुकासम्म मैले हेर्थे। बन्द गर्नेबेला सहयोग गर्न आउनुहुन्थ्यो। सबै दिन उस्तै जस्ता हुन्थे। काउन्टरमा बस्यो कस्टमर कुर्यो। मोबाइलमा फेसबुक र युट्युब सधै अनलाइन हुन्थ्यो। बेलुका घर फर्केपछि खाने र सुत्ने मात्र काम हुन्थ्यो
बस्ने र खाने मात्र भएकाले आजभोली मोटाएकी थिए। अरुले देख्दा सबै कुशल मंगल थियो। घरभित्रको मुख्य समस्या अरुलाइ थाहा हुने कुरै भएन। वस्, समस्या एउटै थियो। बुढाले सेक्स तिर खासै ध्यान दिनुहुन्थेन। महिनामा यदाकदा १-२ पटक संगै सुत्न आउनुहुन्थ्यो। केही सेकेन्डको किस, अनि थोरै स्तन माडेपछि मात्र केही मिनेट सेक्स गर्ने प्रयास पछि बुढाको उर्जा सकिन्थ्यो। आफु भने भर्खर उत्तेजित भएकी हुन्थे। २ वर्षमा अहिलेसम्म बुढाले ५ मिनेट पनि आनन्द दिएका छैनन्।
कोरानाको पहिलो लहर सुरु हुनु भन्दा पहिलेको कुरा हो। मार्ट बन्द गर्ने बेला एउटा केटा छिर्यो। काउन्टरमा आएर सोध्यो, ‘तपाइसंग सु पोलिस छ?’
एकै झटमा मेरो पुरै शरिर स्क्यान गर्यो। अनि मेरो आँखामा आँखा जुधाएर सोध्यो। त्यसरी मलाइ धेरै कम केटाहरुले हेरेका थिए। उमेरमा म भन्दा ४-५ वर्ष कान्छो देखिन्थ्यो। चम्किला आँखा थिए। मैले त उसले सोधेको प्रश्न तिर ध्यान दिनै बिर्सेछु। भर्खर जवानीमा छिरेकी केटी झै सुझबुझ हराएछ।
‘कालो रंगको।’, उसको आँखा मेरो आँखामा अड्डियो। अनि मेरो ओठमा पुग्यो।
‘छ नि किन नहुनु।’, म कुर्सीबाट उठे। मार्टको अर्को छेउ तिर गए। उ मेरो पछि पछि आयो।
सु पोलिस राखेको ठाउँमा गएर टुक्रुक्क बसे। अनि सामान निकाले।
‘होइन, मैले त टिनको बट्टामा हुने खोजेको। यस्तो लिक्विडमा होइन।’, उसले भन्यो।
‘यसले मज्जाले काम गर्छ तपाइलाइ, लगेर हेर्नुस्, भएन भने फिर्ता ल्याए नि हुन्छ।’, मैले भने।
‘अब सु पोलिस पनि कसले फिर्या ल्याउँछ र?’, उसले हाँस्दै भन्यो, ‘ठिकै छ यहि लान्छु।’, मैले उसको हातमा राखिदिए।
काउन्टर तिर हिडे। उ पछि पछि आयो।
‘तपाइलाइ पहिले त यहाँ देखेको थिइन, नजिकै बस्नुहुन्छ?’, मैले फिर्ता पैसा दिदै सोधे।
‘एक हप्ता जस्तो भयो रुम सरेको, यहि चर्चबाट अलिकति भित्र हो।’, उसले खुसी हुँदै भन्यो।
‘ल छिमेकी हुन आउनु भएछ, किनमेल गर्न यही आउनु नि।’, मैले भने। उसको ध्यान मेरो ओठमा थियो। अनि फेरी माथी आँखामा हेर्थ्यो। उसको हेराइमा अर्कै जादु थियो। खै के थियो, उसले हेर्दा सिरिङ्गै बनाउँथ्यो।
पसलबाट उ हिड्यो। सिसिक्यामेराको फुटेज रिप्ले गरे। उ मेरो पछि पछि आउँदा मेरो पुठोमा हेर्दै हिडेको रहेछ। अनि टुक्रुक्क बसेको बेला, ट्राउजर तल सर्केछ, ढाड देखिएको रहेछ, ढाडको तल पेन्टीको इलास्टिक देखिएको रहेछ। उसले निकै बेर त्यहि नियालेर हेरेको देखे। मनको ढुकढुकी बढ्यो। कसैले कामुक नजरले आफुलाइ हेर्दा आनन्द आउने रहेछ। खुसी हुँदै सटर बन्द गरेर घर तिर लागे
त्यो केटा प्रत्येक दिन जस्तो आउँथ्यो। धेरैजस्तो चकलेट लान्थ्यो। कहिलेकाँही तरकारी लिन आउँथ्यो, आलु अनि प्याँज लैजान्थ्यो। चिनी, चियापत्ति अनि प्याकेटका खानेकुरा म आफै निकालिदिन्थे। मेरो मच्किएको पुठो हेर्दै उ पछि पछि आउँथ्यो। म सधैझै टुक्रुक्क बस्थे। कहिले काँही उ पनि मसंगै टुक्रुक्क बसेर सामान निकाल्दै गफ गर्थ्यौ। म सामानको विशेषता बताउँथे। उ पुराना किनमेलका घटना सुनाउँथ्यो।
हप्तौ बितिसकेको थियो। काउन्टरको कुर्सीमा बसेपछि कहिले बेलुका हुन्छ भनी हुटुहुटी चल्थ्यो। मात्र केही मिनेटको गफगाफको लागि उसैको प्रतिक्षा गर्न थालेकी थिए। उ सधैझै साढे ८ को आसपास आउँथ्यो। कति पटक त उसलाइ पर्खदै ९ बजेसम्म पनि पसल खोलिराख्थे। कहिले काँही साच्चै नौ बजेको आसपास आइपुग्थ्
‘अहिलेसम्म त बन्द गर्नु भ’को छैन। क्या लक! मेरै लागि खोलिराख्या हो क्या?’, उसले जिस्काउँथ्यो।
‘तपाइलाइ नै पर्खेको हि। कति ढिलो त मान्छे पनि।’, मैले पनि जिस्किदै भन्थे।
प्रत्येक दिन उ केही न केही कुरा सुनाउँथ्यो। उसको व्यक्तिगत कुरा, उसको अफिसको घटना।
‘कति कमाउनु हुन्छ?’, मैले एकदिन सोधे।
‘राम्रै छ कमाइ।’, उसले भन्यो।
‘भन्नु न कति छ।’, मैले सोधे अनि जवाफको प्रतिक्षामा उसलाइ हेरिरहे।
‘छ, त्यस्तै लाख जति।’, उसले भन्यो।
‘अरे, के गर्नुहुन्छ?’, मैले सोधे।
‘सफ्टवेयर बनाउँछु।’, उसले भन्यो।
‘कति आनन्द रहेछ, कुर्सीमा बसीबसी कमाइ।’, मैले जिस्काए।
‘तपाइ पनि त कुर्सीमै बसेर कमाइ गर्नुहुन्छ नि।’, उसले मुस्काउँदै भन्यो। अनि मेरो ओठमा हेर्यो।
आजकाल बेलुका ओठमा लिपग्लस लगाउँथे। घर जानु भन्दा अघि पुछेर जान्थे।
‘के लगाउनु भ’को त्यस्तो, पुरै टल्केको छ त।’, उसले ओठ देखाउँदै सोध्यो। मनमनै खुसी भए।
‘लिप ग्लस। सुहाएको छ?’, प्लास्टिकमा सामान राखिदिदै सोधे।
‘दामी देखिएको छ। पहिले लगाउनु भएजस्तो लाग्थेन।’, उसले भन्यो। अझै खुसी भए। उसले मेरो यस्ता कुरा ख्याल गर्दो रहेछ।
‘तपाइ यसरी विहेवारी भएकी केटीको ओठ हेर्दै नहिड्नु त!’, जिस्काउँदै भन
उ मुसुक्क हाँस्यो। फेरी ओठ तिर हेर्यो अनि आँखा जुधाउँदै मुस्कायो अनि, ‘गए म त। बन्द गर्ने होइन पसल?’, भन्दै उ बाहिर निस्क्यो। उसंगका यी छोटा वार्तालापले मेरो मनमा दबेको यौन चहानालाइ बाहिर निकाल्न खोज्थ्यो। थाहा छैन उसले एउटी विहे गरेकी केटीलाइ कस्तो नजरले हेर्छ। तर यसरी नै हच्किदै बोल्दा आनन्द लाग्थ्यो। दिनभरीको थकाइ मरेको जस्तो हुन्थ्यो। कहिलेकाही उ नआउँदा दिन नै फोकटमा बितेझै हुन्थ्यो। प्रत्येक दिनको अन्तमा उसको उपस्थितिको बानी परिसकेछ।
कोरोनाको पहिलो लहर भित्रिएपछि पसल बन्द भए। झन्डै २-३ महिना घरबाट खासै बाहिर निस्किएनौ। त्यसपछि दिनको केही घन्टा पसल खोल्न दिने भयो। बेलुका ७-८ बजेसम्म अनि बिहान केही बेर। भरतपुरको मार्टमा कामगर्ने मान्छेहरु घर हिडिसकेका थिए। पास मिलाएर बुढा भरतपुर हिड्नुभयो। मैले काठामाडौंको मार्ट चलाउने, बुढाले उताको। विहे गरेको साढे दुइ वर्षमा पहिलो पटक फ्ल्याटमा एक्लो रात बिताए। बुढा भरतपुर हिड्नुभ’को हप्ता दिन भइसकेको थियो। बेलुका सटर बन्द गर्ने बेलामा त्यो केटा टुपलुक्क आइप
महिनौ पछि भेट भएको थियो। हालखबर सोधे। केही बेर कोरानकै कुरा भयो। बेलुका धेरै बेर खोल्न दिन्थेछ, मैले सटर सबै बन्द गरे। बन्द पसल भित्र उ र म मात्र थियौ। उ आउँछ भन्ने थाहा भएको भए राम्री भएर आउँथे होला। मनमा धेरै कुरा खेल्न थाल्यो। उसले सामान निकाल्दै काउन्टरमा ल्यायो। फेरी बन्द हुन्छ कि भनेर एकैपटक धेरै थोक किन्न आएको रहेछ।
‘भोली आए नि भैहाल्छ नि, एकैचोटी लानु पर्दैन क्या।’, मैले भने। उसलाइ दैनिक दैनिक भेट्ने लालसा हुन्थ्यो।
‘भोली नि आउँछु, यति सामान त चाहिएकै छ, आज पहिलो पटक किनमेल गर्न आएको, केही बाँकी छैन किचनमा।’, उसले भन्यो।
मैले सामान प्याक गर्दै मूल्य जोड्न थाले। उ काउन्टर अगाडीको कुर्सीमा बस्यो। उसले मलाइ हेर्दै थियो। म भने क्यालकुलेटरमा ध्यान दिन खोज्दै थिए।
उसको नजर मेरो छाती तिर थियो, भन्यो, ‘मोटाउनु भएछ तपाइ।’
‘खाने बस्ने बाहेक काम छैन, लकडाउनमा मोटाइयो भन्या।’, मैले भने।
उसले पैसा दिएपछि बत्ति बन्द गरेर उसंग बाहिर निस्के। सटर खोल्न र बन्द गर्न हेल्प गर्यो। अनि गफिदै संगै बाटो क्रस गरेर हिड्यौ
‘कता पट्टि हो तपाइ बस्ने?’, मैले सोधे।
‘अझै अगाडी।’, उसले भन्यो। उसको भन्दा पहिले मेरो फ्याल्ट आयो। उसले ३-४ वटा घर परको घर देखायो। उ यति नजिकै बस्दो पो रहेछ। गुडनाइट भनेर उ हिड्यो।
घर पुगेर ऐना हेरे। पहिले भन्दा साच्चै मोटाएकी थिए। छाती निकै ठूला देखिएका थिए। थाइको आकार पनि बढेको थियो। पुराना लुगाहरु निकै टाइट हुन थालेका थिए। त्यो केटा यति नजिकै बस्छ भन्ने कुराले निकै खुसी भएको थिए। बुढा नभएकाले मनलागेको जस्तोसुकै लुगा र मेकअप गर्न आँट आएको थियो
भोलीपल्ट, बाहिर पातलो ज्याकेट जस्तो आउटर लगाएर निस्के। ब्रा नलगाइ समिज मात्र लगाएकी थिए। हिड्दा स्तन छचल्किन्थे। दाँया बाँया हल्लिन्थे। धन्न बाहिरको आउटर लुज थियो, त्यसैले भित्रको तहल्का बाहिरबाट देखिदैन्थ्यो। पहिलो पटक ब्रा नलगाइ पसलमा बसेकी थिए। त्यो केटालाइ भेट्न मन आतुर थियो। लिप ग्लस लगाएर बसे। आठ बजेतिर पुलिस बाइकमा साइरन बजाउँदै पसल बन्द गर्न हिडिरहेका थिए। सबै सटर बन्द गरे, भित्र छिर्ने एउटा सटर आधा खोलेर उसलाइ पर्खदै बसे। केही बेरमा उ यतै आउँदै गरेको देखेपछि आउटरको चेन खोलेर कुर्सीमा बसे अनि मोबाइल चलाउन थाले।
उ भित्र छिर्यो, ‘बन्द गर्ने होइन, पुलिसहरु हिडिरहेका छन्।’ उसले भन्यो।
‘सटर तान्दिनु न।’, मैले भने। उसले सटर बन्द गरिदियो।
‘के हो तपाइ त आज, गर्भी भयो क्या धेरै?’, उसले मेरो पुरै छाती नियाल्दै सोध्यो।
‘गर्मी छ नि हौ।’, मैले भने। मनमा अनौठो लाज लागेर आयो। शरीरमा साच्चै गर्मी महसुस भयो। स्तनको मुन्टा साह्रो भएको जस्तो भयो।
आज उसको आँखा घरीघरी मेरो छाती तिर गइरहेको थियो। कुरै कुरामा आइक्रिम निकालेर खान थालियो। झन्डै ४५ मिनेट हामी कुराकानी गर्दै भुल्यौ।
उसलाइ मैले आफ्नो विगतको कुराहरु सुनाए। स्कुल अनि कलेज पढ्दाका कुरा। उसले पनि रमाइला घटनाहरु सुनायो। रक्सी खाएर मच्चाएको उपद्रोहरु भन्यो।
‘हैन तपाइ आज हिजो भन्दा फरक देखिनु भ’को छ। के परिवर्तन गर्नुभयो?’, उसको आँखा मेरो छातीबाट ओठ अनि मेरो आँखामा आएर अडियो।
‘ल है यसरी अर्काकी चेलीबटीलाइ नियाल्ने काम नगर्नु। मान्छेले थाहा पाए भने के भन्लान।’, मैले जिस्किदै भने।
उ मुसुक्क हाँस्यो। ‘नियाल्या छैन हो, जे देेखे त्यो भन्या मात्र हो।’, उसले हाँस्दै भन्यो।
मैले उसको पैसा हिसाब गर्न थाले। टेबुलमा झुकेर क्यालकुलेटर दबाउन थाले, एकदमै ढिलो गतिमा।
आँखाको एउटा कुनाबाट उसको गतिविधि देख्दै थिए। उ मेरो समिज भित्र नियाल्दै थियो। मैले अझै ढिलो गर्दै बसे। उसले केही भनेन। गुपचुप मन मनै रोमाञ्चित हुँदै बस्यौ।
त्यो बेलुकी पनि संगै फर्कियौ। घर पुगेर ऐनाको अगाडी हेरे, साच्चै अति नै देखिएको रहेछ। अझ थोरै झुक्दा त स्तन पुरै झोलिएको देखिदो रहेछ। अनि पो लाज लागेर आयो। जिउँ सिरिङ्ग भयो। त्यो केटाले के सोचिरहेको होला?
भोलीपल्ट पनि उस्तै गरी अर्को समिज लगाए। हिजो भन्दा पातलो थियो। नियालेर हेर्दा दुधको मुन्टा उठेको बाहिरबाटै देखिन्थ्यो। बाहिर आउटर लगाए। अनि ट्राउजरको सट्टामा स्कर्ट लगाए। स्कर्ट घुँडा भन्दा तलैसम्म थियो। एकैचोटी छोटो स्कर्ट लगाइहाल्ने हिम्मत आ
उसको प्रतिक्षामा रेडी भएर बसेकी थिए। लिपग्लस लगाए, आउटर खोले, अनि क्लिभेज बढी देखिने गरी समिज तल ताने। स्कर्ट कम्मर भन्दा माथी सारे। अब साँप्राको आधा मै स्कर्ट सकिन्थ्यो। पुरै शरिर नियाले। अलिक बढी त भएन? लाज पनि लाग्यो। मुटुको ढुकढुकी बढ्न थाल्यो।
उ ठिक त्यहि टाइममा आइपुग्यो। सटर बन्द गरेर हिजो झै आइक्रिम खान थालियो। कुर्सीमा खुट्टा क्रस गरेर बसे। स्कर्ट झनै माथी सुर्कियो। साँप्रा प्रदर्शन गरिरहेको थिए। उसका आँखा साँप्रा खप्टिएको ठाउँमा जान्थ्यो। घरी क्लिभेज नियाल्न खोज्थ्यो। अनि आँखा जुध्थ्यो। मैेले मेरो पुराना सम्बन्धहरुको बारेमा उसलाइ गफ लगाउँदै थिए। डेट गएको कुराहरु सुनाउँदै थिए। हात समातेका कुरा, अनि त अंगालो हालेका कुराहरु सुनाइरहेको थिए। उसले पनि बिचबिचमा प्रश्न गरेर झनै बिस्तारमा भन्न उक्साइरहेको थियो। बन्द मार्ट भित्र तापक्रम बढ्दै
गफैगफमा पालिसको बारेमा गफ सुरु भयो।
‘हातमा पालिस लगाउनु हुन्न ?’, उसले सोध्यो।
‘लुगा धुँदा, भाँडा माँझ्दा सबै गइहाल्छ।’, मैले भने। काउन्टरको घर्राबाट गुलाबी पालिस निकालेर टेबुलमा राखे।
उसले पालिसको बट्टा ओल्टाइ पोल्टाइ हेर्यो, ‘लगादिम?’
‘हुन्छ, जाँगर छ भने।’, मैले मुस्काउँदै भने।
कुर्सी तानेर उ काउन्टर भित्रै छिर्यो। मेरो अगाडी कुर्सी राखेर बस्यो। मेरो हात समात्यो। पहिलो पटक उसले छोएको थियो। तातिरहेको शरीरमा झनै करेन्ट दौडियो।
‘अर्काकी छोरीचेलीलाइ यसरी हात समातेर पालिस लगाइदिने कस्तो मान्छे हो तपाइ, त्यो पनि राती राती?’, मैले जिस्काउँदै सोधे।
उ मुसुक्क हाँस्यो, अनि पालिस लगाउन थाल्यो। उ निकै नजिक थियो। उसको पर्फ्युमको बासनाले झनै तरंगित भएकी थिए। खप्टिएका साँप्रा खोले। उसले साँप्रा तिर हेर्यो।
‘तपाइको गर्लफ्रेन्ड छ कि छैन?’, मैले हिम्मत जुटाएर सोधे।
‘किन?’, उ पालिस लगाउन मै मस्त थियो।
‘भन्नु न।’, मैले जोड गरे।
‘थिए, अहिले छैन।’, उसले भन्यो। निकै बेर कोही बोलेन। उ पालिस लगाउँदै मेरो क्लिभेज र साँप्रा कर्के आँखाले हेर्दै थियो।
‘तपाइलाइ कस्तो सम्बन्ध मन पर्छ?’, मैले सोधे।
‘कस्तो भन्नाले?’, उसले सोध्यो।
‘भन्नाले… हुन्छ नि वान नाइट स्ट्यान्ड, वा लामो समय लगाएर बिस्तारै बनाएको सम्बन्ध।’, मैले भने।
‘दुवैको आफ्नै मज्जा छ नि।’, उसले भन्यो, ‘समय लगाएको पनि रमाइलो हुन्छ। रोमान्टिक हुन्छ।’
‘मलाइ पनि हतार नगरेको सम्बन्ध मन पर्छ, हुन्छ नि बिस्तारै एक-एक वटा सिढी चढ्दै बनेको सम्बन्ध साच्चै रोमान्टिक हुन्छ।’, मैले भने। बुढाको ५ मिनेट मै सकिने सम्बन्धले दिक्क भइसकेको थिए। तर यो केटासंगको सम्बन्ध रोमान्टिक चल्दै थियो। कुराकानी बढ्दै व्यक्तिगत भयो। आज उ पालिस लगाइदिदै छ। भोली के होला? सोच्चै मन थप रोमाञ्चित भयो।
पालिस लगाइसकेपछि हामी पसल बन्द गरेर निस्क्यौ।
भोलीपल्ट स्कर्ट भित्र पेन्टी पनि नलगाइ, समिज मात्र लगाएर पसलमा उसलाइ कुरेर बसे। उसलाइ थाहा दिनु जरुरी थिएन, तर यसरी भित्री वस्त्र नलगाइ केटाको सामु बस्दा मनमा छुट्टै हलचल हुँदो रहेछ।
सटर बन्द गरेर कुरा गर्दै जाँदा केटीले नाइटो देखाउने गरी लुगा लगाएर हिड्ने कुरा राम्रो नि नराम्रो भनेर वादविवाद चल्न थाल्यो।
‘के हुन्छ र नाइटो देखाउँदैमा?’, मैले सोधे।
‘हुन त केही हुँदैन, तपाइ सक्नुहुन्छ हिड्न?’, उसले सोध्यो।
‘सक्छु। के ठूलो कुरा हो र नाइटो देखाउनु!’, मैले भने। ‘ल, यत्ति हैन।’, मैले समिज माथी उचालेर नाइटो देखाइदिए।
उसले आँखा ठूलो पारेर मेरो नाङ्गो पेटमा हेर्यो।
‘वाउ! छुन मिल्छ?’, उसले हात लम्कायो।
‘अर्काकी छोरीचेलीको नाइटो छुने रे?’, मैले जिस्काए। उ हाँस्यो अनि औला नाइटोको प्वालमा छिरायो।
‘अबुइ! काउकुती लाग्यो।’, मैले समिज तल सारेर र पेट ढाके।
‘यी मेरो त यस्तो पो छ।’, उसले टिसर्ट माथी उचालेर देखायो।
‘छ्या.. कति धेरै रौं हो तपाइको?’, पेटसम्म रौं थियो।
‘तपाइको पनि छ नि हो ठाउँ ठाउँमा’, उ मुसुक्क हाँस्यो।
‘छ यहाँ काखीमा।’, मैले हात उचालेर देखाइदिए। सेभ नगरेरको निकै समय भइसकेको थियो।
‘सेभ गर्नु न, केटीहरुलाइ त काखी सफा भको राम्रो देख्छ नि।’, उसले भन्यो।
‘कसलाइ देखाउनु छ र?’, मैले जिस्काउँदै सोधे। उ कुर्सीबाट उठेर बेच्न राखेको रेजर लिएर आयो।
‘खै म सेभ गर्दिन्छु।’, उसले भन्यो। अनि मेरो अगाडी आएर उभियो।
मैले हात उचाले। माथीबाट उसले मेरो समिज भित्र झोलिएका स्तन नियाल्दै थियो। मेरो पाखुरा समात्यो अनि रौं खौरिन थाल्यो। काउकुती अनि आनन्द एकैपटक भइरहेको थियो।
झन्डै १० मिनेट लगाएर उसले मेरो दुवै काखीको रौं खौरिदियो।
‘अरु पनि खौरिदिम?’, उसले आँँखा झिम्काउँदै सोध्यो। उसले जिस्काएको मात्र थियो। तर मेरो मुटु दौडन थाल्यो। उसले रेजर सफा गरेर घर्रामा राख्दैगर्दा मैले भने,
‘सेभ मात्र गर्ने भए मात्र, अरु केही पनि गर्न पाइदैन…’, मैले भने। अनि उसलाइ हेरे। उ मुसुक्क हाँस्यो। अनि भन्यो, ‘सेभ मात्र गर्दिम्ला, मलाइ थाहा छ तपाइलाइ एउटा एउटा सिढी चढेको मन पर्छ भन्ने।’, उसले भन्यो अनि रेजरमा अर्को ब्लेड चेन्ज गर्यो।
मैले स्कर्टको फुकालेर टेबुलमा राखे। मेरो पेन्टी बिहिन यौनांङ्ग तिर हेर्यो।
‘पेन्टी पनि नलगाउनु हुने? हैट!’, उसले भन्यो।
‘नजिस्काउनु न।’, मैले उसको कुममा पिट्दै भने। कुर्सीमा टाङ फट्याएर बसे। कालो जंगल भइसकेको थियो। वर्षौ नकाटेको जाँठाको झाडी थियो।
उसले भुँइमा पलेटी मारेर बस्यो। उसको अनुहार मेरो यौनीबाट मात्र एक डेढ फिट टाढा थियो। फट्टिएको साँप्राको बिच हुँदै उसले मुन्टो मेरो योनीको नजिक ल्यायो। ‘मिठो बासना आएको छ। यहाँ पनि क्रिम लगाउनु हुन्छ क्या हो?’, उसले भन्यो।
मैले उसको टाउकोमा प्याट्ट पिटे। उसले मेरो योनीको रौं खौरिन थाल्यो। रौं समात्दै, साँप्रा समात्दै खौरिदै गयो। बिस्तारै बिस्तारै, एक-एक रौं खौरदै गर्दा म झनै उत्तेजित हुँदै गए। योनीबाट चिप्लो पानी रसाउन थाल्यो। खौरिएका रौंहरु चिप्लो पानीमा टाँसिन्थे। उसले हातले बिस्तारै रौै सफा गर्थ्यो। योनीमा हातको स्पर्शले झनै उत्तेजना आउँथ्यो। कुर्सीमा टाउको पछाडी गरेर ढल्केर आनन्द लिदै थिए। योनीको वरिपरि रेजरको कटाइ अनि उसको हातले रौं सफा गर्दा योनीमा गरेको स्पर्शको आनन्दमा डुब्दै थिए।
यौन सधै हतपतमा गरिदै आएकोले राम्रोसंग आनन्दित हुन पाएकी थिइन। छिट्टै स्खलित हुने बुढाको बानीले गर्दा सायद म यति धैर्यवान भएकी थिए। यौन गतिविधिको हरेर चरणको स्पष्ट अनुभव गर्न चाहन्थे। सायद जीवनमा यहि कुराको कमी भएको थियो र यो केटाले पुरा गर्दिदै छ।
झन्डै १० बजिसकेको थियो। उ अझै रेजर लगाइरजेको थियो बिस्तारै। सायद रौं खौरेर अघिनै सकिएको होला, मैले आँखा खोलेर हेर्न पनि चाहिन। उसले सकियो भनेर पनि भनेन। योनीबाट चिप्लो पानी बगिरहेको थियो। एकछिन पछि आँखा खोले अनि तल हेरे। बसेको कुर्सीभरी चिप्लो पानी लतपतिएको थियो। उसले सेभ गरेर सकिसकेको रहेछ तर पनि अझै रेजर चलाउँदै थियो।
‘तपाइको पनि सेभ गर्नुपर्ने छ?’, मैले सोधे।
‘अरु केही नगर्ने भए मात्र!’।, उसले जिस्काउँदै भन्यो।
म सिटबाट उठे। रौं जम्मा पारेर डस्टविनमा हाले। उसले ट्राउजर खोल्यो। अन्डरवेयर खोल्यो। उसको लिङ्ग ठिङ्ग उभियो। सायद निकै समय देखि नै ठन्किरहेको थियो। टुप्पो भरी चिप्लो पानी थियो। कुर्सीमा बस्यो। म भुइँमा बसेर उसको लिङ्ग समात्दै रौं खोरिदिन थाले। खासै लामा थिएनन्। सायदले उसले केही महिना अघि खौरेको हुँदो हो। लिङ्ग तातो थियो। कडा थियो। तल झोलिएका गेडा र लिङ्ग पन्छाउँदै उसको रौं खोरिदै गए। लिङ्गको टुप्पाबाट निस्केको चिप्लो पानी मेरो पाखुरामा लतपतियो।
११ बजेतिर हामी घरतिर लाग्यौ।
मेरो फ्याल्टको गेटमा पुगेपछि मैले बिस्तारै भने, ‘आज मेरो मै बसम, हुन्न?’ उसले चारै तिर हेर्यो अनि मुन्टो हल्लायो। अनि मेरो पछि पछि आयो।
बैठक कोठा हुँदै मेरो कोठामा छिर्यौ। उ ढोका नेरको सोफामा बस्यो। दुवै चुप थियौ।
म ऐनाको अगाडी उभिए। आउटर फुकाले, समिज फुकाले। अनि स्कर्ट भुँइमा झर्यो।
‘ब्रा पनि नलगाउनु भ’को?’, उसले मेरो स्तन हेर्दे भन्यो। मैले केही नभनी उसको नजिक गए अनि भने, ‘लुगा खोलेर बाथरुम आउन है।’
म बाथरुम छिरे। सावर अन गरे। खुल्लै रहेको ढोकाबाट उ छिर्यो। नाङ्गो। ठनिक्क ठन्काएर।
मैले उसको हातमा साबुन दिए। अनि पछाडी फर्के।
पछाडी उ मेरो नजिकै आयो। उसको लिङ्गको टुप्पाले मेरो चाक नेर टुच्चटुच्च घोचिरहेको थियो। मेरो हत्केला र पाखुरामा साबुन दल्यो। काखीमा साबुन दल्यो। अनि ढाड अनि पेट। अनि छातीमा दल्यो। दुवै स्तनमा साबुन लगाएर मुसार्न थाल्यो। तल झुक्यो। खुट्टामा साबुन लगायो। अनि तिघ्रा हुँदै दुवै साँप्रामा दल्यो। अनि पछाडीबाट हात छिराएर योनीमा साबुन दलेपछि साबुनको डल्लो राखेर हातले फेरी सबै ज्यानमा मुसार्न थाल्यो। मेरो दुध र योनी साबुनले चिप्लो भएको थियो। सायद योनीबाट चिप्लो पानी पनि झरिरहेको थियो।
म उसको पछाडी गए। अनि उसको शरिरमा साबुन दल्न थाले। सबै तिर साबुन लगाएपछि उसको लिङ्ग समाते। अनि मेरो मुठ्ठी भित्र बाहिर गर्दै साबुन लगाएर मुसारे। उसको गेडाको थैलीमा साबुन लगाए। उसको चाकमा साबुन दले। अनि फेरी मुसार्न थाले।
सावर खोलेर दुवैजना सावर मुनी बस्यौ। आमुन्ने सामुन्ने। एक अर्काको छाती मुसार्दै साबुन पखाल्न थाल्यौ । अनि दुवै जना अंगालोमा, एकअर्काको शरीरमा रगडिन थाल्यौ। मेरो स्तनहरु उसको छातीमा दल्न थाले। उसको लिङ्गले मेरो योनीमा घोच्न थाल्यो। योनीबाट चिप्लो पानीको मुल फुटिरहेको थियो। नुहाइसकेपछि हामी फेरी मेरो कोठामा गयौ। टावेलले एकअर्काको शरीर पुछ्यौ।
लिप ग्लस निकालेर मैले ओठमा लगाए। उसले हेरिरह्यो।
‘कस्तो देखिएको छ?’, मैले दुध हल्लाउँदै शरीर मच्काउँदै सोधे।
उ नजिक आयो अनि ओठमा किस गर्यो।
‘चुस्न मन लाग्ने भएको छ।’, उसले भन्यो।
‘के पर्खनु भएको त, चुस्नु न..’, मैले कानमा गएर भने। उसले मेरो ओठ चुस्न थाल्यो। लिपग्लस सबै चुस्यो। अनि जिब्रो भित्र हुल्यो। जिब्रोको चिप्लो पानीमा आनन्दित हुन थाले। उसले जिब्रो चुस्न थाल्यो। निकै बेरको चुसाइपछि उसले हात मेरो स्तन तिर बढायो। अनि स्तन मुसार्न थाल्
झन्डै २-३ घन्टा टङ किस चलिरह्यो। स्तन मुसारेपनि त्यो भन्दा अघि अरु केही भएन। लामो किसले गर्दा दुवैजना थकित भएर निदाएछौ
बिहान सबेरै निन्द्रा खुल्यो। खाटको अर्को साइडमा त्यो केटा नाङ्गो निदाएको थियो। उत्तानो सुतेको उसको लिङ्ग कालो अनि सानो जाडोमा कुक्रुक सुकेझै देखिन्थ्यो। उसको लिङ्ग नजिक पुगे। त्यहाँबाट उसको बासना आएको थियो। सायद बेलुका निस्किएको चिप्लो पानीको गन्ध थियो। कतै कतै रौं सेभ गर्न बाँकी भएको रहेछ। २-४ वटा लामा लामा रौं उसको लिङ्गको वरिपरि देखिन्थ्यो। म खाटबाट ओर्ले। एकाबिहानै ऐनाको अगाडी यसरी नग्न उभिएको थिइन। आफ्नै रुप देखेर उत्तेजना आयो। पुष्टिएको स्तन, सेतो गोरो छाला अनि टम्म चिप्ला साँप्रा, म साच्चै आकर्षित केटी भएको महसुस भयो।
टिसर्ट र स्कर्ट लगाए। अनि किचन तिर छिरे। हिजोको भाँडा माझ्न थाले। सकिनै लागेको थियो। पछाडीबाट च्याप्प स्तन समातेर अंगालो हाल्यो। सुरुमा त झसंग भए। उसको कडा भएको लिङ्ग मेरो पुठोमा दबिएको महसुस गरे।
‘छ्या लुगा लगाएको आउनु न।’, मैले भने।
‘मलाइ तपाइको पुतिको पानी चुस्न मन छ।’, उसले मेरो कानमा साउती मार्यो। उसले पहिलो पटक यसरी बिजेती शब्द बोलेको थियो। लाज लाग्यो। भाँडा मस्काइरहे।
उसले एउटा हात मेरो साँप्रामा लग्यो अनि मुसार्दै माथी सार्न थाल्यो। स्कर्ट भित्र माथी माथी लग्दै गयो। अनि मेरो योनीसम्म पुर्यायो।
‘पेन्टी पनि नलगाइ बस्नु भ’को…’, उसले मेरो कान टोक्दै भन्यो, ‘अब त चुस्छु नै।’
‘खै छोड्नु न।’, मैले लाज मान्दै भने।
उसले मेरो टिसर्ट र स्कर्ट खोलिदियो। मैले वास्तै नगरी भाँडा माझिरहे। उसले पछाडीबाट मेरो स्तन खेलाइरह्यो। म बिहानको नित्य कर्म गर्न थाले।
यस्तो नग्न बिहानी त कहिल्यै भएको थिएन। दाँत माँझ्दै थिए, मुखबाट पेस्ट निस्किएर मेरो छातीमा लागेको थियो। किनकी उसले स्तन माड्दा घरी आफुतिर तान्थ्यो अनि अंगालो कस्थ्यो। म अगाडी पछाडी मच्चिरहेको थिए। उसको लिङ्ग मेरो चाकको प्वालमा ठोकिरहेको थियो।
‘अब त अति भयो के?’, मैले जिस्काउँदै अंगालोबाट निस्केर दगुर्दै बाथरुम छिरे। चुकुल लगाए।
ढोका बाहिर उ ढोका खोल्न अनुरोध गर्दै थियो। फ्रेस भएर केही बेरमा निस्के।
उ बाहिर कुरेर बसिरहेको थियो।
म नजिकै पुगेपछि उसले मेरो हात समातेर डोर्याउँदै लग्यो। म पछि पछि गए। बेडरुममा पुगेपछि उसले मलाइ खाटमा सुत्न इशारा गर्यो। म उत्तानो सुते। उ मेरो खुट्टा पट्टि पस्यो। अनि जिब्रोले मेरो योनी चलाउन थाल्यो। एका बिहानैको यो उत्तेजनाले म एकैछिनमा शिथिल भए। योनीबाट पानी निस्किन थाल्यो। उसले जिब्रो डिलमा रगड्दै प्वाल भित्र बाहिर चाट्न थाल्यो। मैले खुट्टा खप्ट्यार उसको टाउको चेपे। उ झनै आक्रमक भएर मेरो पानी चुस्नै थाल्यो।
म उत्तेजनाको शिखरमा थिए। आँखा चिम्म गरेर आनन्द भोग गर्दै थिए।